Nezvedu | Shandong Guanxian Huiquan Traffic Zvivakwa Co., Ltd.
Iyo kambani ikozvino nyanzvi mukuvakwa kwemigwagwa mikuru ichisimbiswa kune yekuchengetedza nzira. Fekitori yedu iri vakapakata maviri inopisa-Dip galvanizing mitsetse uye mbiri electrostatic pfapfaidzo kupenda mitsetse, zvichiita kuti kubereka matani 150,000 matanda okuzvidzivirira gore negore. on. Yedu yakakura yekutengesa network inovhara nyika dzinopfuura makumi mana muAsia, Europe, South America, North America, Africa, Oceania. Zvichakadaro, huwandu hwekunze huri pamberi penyika. Saka isu tiri vamwe vevanogadzira uye vane simba kwazvo vagadziri vevadhiyiri.
Huiquan iri kutarisa kuburitsa yepamusoro-soro yekudzivirira, yega yega yekugadzira maitiro inoitwa zvakanyatsoenderana ne ISO, CE. Isu takawana ISO, SGS, CE, BV nezvimwe zvitupa. Iyo kambani yakagadzirirwa kukunda musika uye vatengi vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nebasa rekutendeseka. Muna 2017, Huiquan akasarudzwa semutengesi wepurojekiti yekuvhura ye "Belt uye Road" chirongwa chemugwagwa.
Huiquan zvifambiso zvekufambisa zvinoda kushandira pamwe nemoyo wese nevatengi vedu kugadzira mhedzisiro uye kuzadzisa zvibodzwa zvekuhwina.
Boka rekunze rinosanganisira Kuteedzera kweVatengi, Kutengesa, Mushure mekutengesa Dhipatimendi. Kutarisira mberi kushandira pamwe newe.Pabasa rako.
Main zvigadzirwa: W Beam, U post ne spacer, C positi ine spacer, H post ine spacer uye zvishongedzo (Bolts & Nuts, Reflector nezvimwewo)
tinogamuchira kushanyirwa kufekitori yedu kubva kumativi ese epasi kuitira zviri nani kuti tizive nezvekambani yedu.